Na-ege ntị music on Spotify Linux mgbe ọ bụla ị chọrọ
Na-ege ntị Music on Spotify Linux ọ bụla unu chọrọ
Nnweta dị iche iche sistem emewo ka Spotify otu ịzụlite ngwa n'ihi na onye ọ bụla na onye ọ bụla nke sistem. Spotify nwere ngwa n'ihi na Windows, Mac, Android, iOS na N'ezie Linux.
Linux bụ ihe sistemụ na-enyere kọmputa ngwa na ọrụ na-enwe ike ịrụ ezi ọrụ. Ọ bụ nnọọ yiri ọzọ sistem dị ka Windows na Mac OS na dị nnọọ ka ndị ọzọ a na-arụ ọrụ usoro, Linux ịwa usoro pụrụ ịchọta na desktọọpụ kọmputa na laptọọpụ dị ka mma.
Ugbu a, anyị maara na dị iche iche na ndị mmadụ chọrọ dị iche iche ihe na Spotify otu mepụtara onye ngwa ona ọrụ ma na-akwado ndị niile sistem. The Spotify ngwa n'ihi na Linux udeme yiri atụmatụ na Windows na Mac OS desktọọpụ ngwa. Ọrụ amaralarị Spotify maka Windows ma ọ bụ Mac OS adịghị mkpa ịmụta otú iji Spotify maka Linux n'ihi na nzọụkwụ na usoro ndị fọrọ nke nta otu ihe ahụ.
Part 1.Install Spotify ahịa na Linux na iji iwu akara ọnụ
Part 2.How iji wụnye Spotify-enweghị iwu akara ọnụ
Part 3.How iwepụ na Linux
Part 4. Download music free na TunesGo
Linux ọrụ na-chọrọ enwe music na-arụ ọrụ ha na kọmputa dị nnọọ ka onye ọ bụla ọzọ. Na Spotify dị na Linux, ha nwekwara ike inweta ihe kasị nke Spotify music ngwa. Ọ bụrụ na ị nwere Linux sistemụ na-ịchọrọ iji wụnye Spotify na kọmputa gị, na-eso ndị dị mfe nzọụkwụ site nzọụkwụ ntụziaka nyere n'okpuru.
Ugbu a, e nwere ụzọ abụọ iji wụnye Spotify na gị Linux arụ ọrụ usoro. Ọ nwere ike arụnyere na site na ọnụ na ya nwekwara ike arụnyere na site na software center.
Part 1. Wụnye Spotify ahịa na Linux na iji iwu akara ọnụ
Tinye Spotify repository gị software isi mmalite site na ichọ software isi mmalite na ịpị ọzọ repository.
Mepee iwu akara ọnụ site na ịpị Ctrl + Alt + T ma ọ bụ chọọ si akụtu site na ịpị Meta / Super / Windows button na ụdị ọnụ.
Nyochaa Spotify ngwugwu site na-agbakwụnye na repository isi. Gị ọnụ, ụdị "sudo apt-isi adv --keyserver hkp: //keyserver.ubuntu.com: 80 --recv-igodo D2C19886" (na-enweghị ruturu) na kụrụ Tinye. Tinye paswọọdụ gị na kụrụ Tinye ọzọ.
The repository isi ugbu a kwukwara.
Na-agba ọsọ usoro update site na iji kọmputa ede iwu a "sudo apt-na-update" (na-enweghị ruturu) na kụrụ Tinye. Chere maka update mezue.
Usoro ugbu a emelitere.
Wụnye Spotify ahịa site na iji kọmputa ede "sudo apt-na-wụnye Spotify-ahịa" na gị ọnụ (na-enweghị ruturu) na kụrụ Tinye ibudata Spotify ngwa n'ihi na Linux.
Ugbu a, ị ga-jụrụ ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịnọgide na. Press Y na gị keyboard na kụrụ Tinye ịnọgide. Ugbu a, na-eche rue download na echichi na-agwụ agwụ.
I nwere ugbu a ọma arụnyere Spotify music ngwa gị Linux kọmputa na iji iwu akara ọnụ. Iji ego ya, na-agba ọsọ Spotify ngwa; nanị chọọ Spotify na ị ga-ahụ na ọ bụ dị na gị Linux kọmputa.
Part 2. Olee otú iji wụnye Spotify-enweghị iwu akara ọnụ
Linux ohere ọrụ na-enwe ike ime ihe ha chọrọ ime ma obu site na iwu akara ọnụ ma ọ bụ site na onyeōzi User Interface (GUI). N'ihi na ndị na-abụghị geeky ma ọ bụ ndị na-abụghị maara na Linux nyere iwu na iwu akara ọnụ nwere ike iji onyeōzi User Interface (GUI) na-eme ihe ha chọrọ ime ma nweta otu N'ihi dị ka ọrụ na-eji iwu akara ọnụ.
Wụnye Spotify site na onyeōzi User Interface (GUI) bụ mfe n'ihi na ọrụ na-adịghị na-egwu na Koodu na iwu akara ọnụ. Iji wụnye Spotify na iji onyeōzi User Interface (GUI) nanị na-eso nzọụkwụ depụtara n'okpuru.
Site na Ihuenyo, emeghe nchọgharị gị (Firefox).
Mepee Spotify website site na ịga na adreesị mmanya na dee www.spotify.com. Ugbu a, kụrụ Tinye na-eche maka na peeji mara.
Na Spotify website, pịa "Get Spotify maka free". Mkpa ka i nwere akaụntụ na Spotify na-enwe ike iji Spotify. Ọ bụrụ na ị na-adịghị otu akaụntụ Spotify, dị nnọọ pịa aha na n'elu aka nri n'akụkụ aka nke nchọgharị ma na-onwe gị ihe na akaụntụ maka free.
Peeji na-esonụ ga-agwa gị na ọ dịghị akwado gị sistemụ (Linux) ma echegbula. Dị nnọọ download windows ngwa nke Spotify gị download nchekwa site na ịpị "Windows" njikọ dị ka e gosiri n'okpuru.
Mgbe nbudata Spotify maka Windows, nso ma ọ bụ ịkwụsịlata Firefox na ịchọta ndị Spotify installer gị download faịlụ ma ọ bụ na nchekwa ị ebudatara installer. Right pịa na installer ma họrọ "na-emeghe wine windows omume Loader" site dobe ala.
Chere maka Spotify ibudata na ịwụnye. Ozugbo echichi zuru ezu, ọhụrụ abụọ akara ngosi ga-egosi na gị na desktọọpụ; "Spotify.lnk" na "Spotify". Ị nwere ike ịga n'ihu na ihichapụ "Spotify.lnk" n'ihi na ọ bụ ihe dị mkpa. Gbaa ndị Spotify na ngwa na abanye na akaụntụ gị malite iji ya.
Spotify maka Linux bụ kpọmkwem otu na nke Windows na Mac na-arụ ọrụ n'otu ụzọ ahụ. Ị nwere ike igwu music, ịmepụta listi ọkpụkpọ na hazie listi ọkpụkpọ N'otu ụzọ ahụ ọ na-eme na Windows na Mac desktọọpụ ngwa.
Part 3. Olee iwepụ na Linux
Iwepu Spotify on Linux dị mfe na ngwa ngwa. Ọ bụ ọbụna mfe na ngwa ngwa karịa iwepu ya na Windows na Mac OS.
E nwere ụzọ dị iche iche iwepụ Spotify on Linux. Niile ụzọ na-ngwa ngwa na-arụ ọrụ zuru okè.
Gaa gị Home ihuenyo na họrọ View
Họrọ Gosi zoro ezo faịlụ
Chọta na ihichapụ .wine nchekwa
Emeghe gị ọnụ (Ctrl + Alt + T), pịnye koodu n'okpuru wee ihichapụ Spotify.wine nchekwa
"RM -rf ~ / .wine" (na-enweghị ruturu)
Emeghe gị ọnụ (Ctrl + Alt + T), pịnye koodu n'okpuru na kụrụ Tinye
"RM -f -R ~ / .wine / drive_c / Mmemme faịlụ / Spotify" (na-enweghị ruturu)
Mee ihe ọ bụla nke ụzọ e kwuru n'elu na kpamkpam ihichapụ ma ọ bụ iwepụ na Spotify ngwa si gị Linux arụ ọrụ usoro.
Nkebi nke 4: Download Spotify music free maka Linux na TunesGo
Top 30 Music arọ na ha Famous Oge gboo Music
Na-ege ntị Spotify Music Online na Spotify Desktọpụ
Olee otú ka Wepụ Audio si MKV
> Resource> Music> Gee Music on Spotify Linux ọ bụla unu chọrọ